भोटेकोसीमा आएको बाढीले बगाउँदा इन्जिनियरसहित २ जना वेपत्ता | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
भोटेकोसीमा आएको बाढीले बगाउँदा इन्जिनियरसहित २ जना वेपत्ता
प्रकाशित मिति २२ असार २०७६, आईतवार ११:३३ लेखक nepali janta
सिन्धुपाल्चोक । अबिरल वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकास्थित शिवश्री हाइड्रो पावरमा कार्यरत दुई जना वेपत्ता भएका छन् । घाइते दुई जनालाई उद्धार गरी उपचार गर्न काठमाडौं पठाइएको छ ।
भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ को बीचमा पर्ने मार्मिङ खोलामा बगेर साइट इन्चार्ज यादवप्रसाद काफ्ले र इलेक्ट्रिसियन रामअवतार चौधरी वेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रवक्ता माधव काफ्लेले जानकारी दिए ।
डिएसपी काफ्लेका अनुसार कामी तामाङ र लाफिङबुद्ध हाइड्रो पावरका पेम्बा थोक्याल शेर्पा घाइते छन् । उनीहरुलाई आइतबार बिहान हेलिकोप्टरबाट ललितपुरको बीएण्डबी अस्पताल पठाइएको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
घटना शनिबार मध्यरातिको भए पनि आइतबार बिहान ७ बजेमात्र खबर पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ ।
गएराति भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नदी नजिकका चारवटा हाइड्रो पावरमा क्षति पुगेको छ । बाढीले निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी, ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी, शुभश्री र चाकुखोला हाइड्रोपावरमा क्षति पुगेको छ । क्षतिको पूर्णविवरण भने आइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पाँच लाख चन्दा नदिँदा पौडेलको हत्या !
काठमाडौँ । पाँच लाख चन्दा नदिँदा रुपन्देहीमा देवदहमा स्थानीय एमाले नेताको…
काठमाडौं । नेपाली कामदारका लागि चौथो प्रमुख रोजगार गन्तव्य युएईसँग शुक्रबार श्रम समझदारी भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को…
मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाको अन्तिम २० प्रतियोगीको नाम सार्वजनिक
अमेरिका । न्यूयोर्कमा हुने मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०१८ को लागि निवेदन दिने अन्तिम २० प्रतियोगीहरूको छनौट सम्पन्न भएको…
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा लगानीका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आउने विदेशीलाई ६ महिना अवधिको गैरपर्यटक भिसा दिने तयारी गरेको…
कांग्रेसले ‘डामे’का राईलाई किन बचाउन चाहन्छन् ओली ?
काठमाडौं । वाइडबडी खरिदमा ५ अर्ब रुपैयाँ घोटला भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले दिइसकेपछि सरकारले गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायिक…
गृह सचिव विदेश गएर प्रहरीको बढुवा अन्योलमा
काठमाडौं । गृह सचिव प्रेम कुमार राई विदेश भ्रमणमा निस्किएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रिक्त रहेका उच्च पदको…